SomaliTalk.com » Warsaxaafadeed: Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo booqasho rasmi ah ku yimid Djobouti.
Ra’iiusl Wasaaraha Soomaaliya oo la kulmay Safiirada Carabta ee fadhigoodu yahay Ethiopia iyo Casho-sharaf uu u sameeyay wafdiga Wasiirka Arimaha Dibadda ee Ethiopia.
Ra’iiusl Wasaaraha Soomaaliya iyo Wafdigiisa ayaa caawa la kulmay Safiirada dalalka Carabta u fadhiya Ethiopia oo uu kala hadlay xiriirka dheer u dhexeeya Soomaaliya iyo Caalamka Islaamka isla markaana waxaa uu sharaxaad ka bixiyay qorshaha Xukuumaddiisa xiliga iyo waxyaabo ay hiigsanayso si loo gaaro xasilooni iyo dib-u-dhiska dalka kadib burbur dheer oo ku dhacay dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Ra’iiusl Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed iyo Wasiirka Arimaha Dibadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa galinkii danbe ee maanta kulan dheer la qaatay Wasiirka Arimaha Dibadda Ethiopia Mudane Tedros Adhanom Ghebreyesus iyagoo ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka labada dal iyo kordhinta iskaashiyo kala duwan oo labada dal ay ka yeeshaan arrimaha ay kamid yihiin amniga labada dal iyo sidii Soomaaliya ay horay ugu socon lahayd.
“ Waxyaabo badan ayaa naga dhexeeya dawladaha dariska sida Ethiopia, waxaa jira caqabado saamaynaya amaanka dalalkeena oo loo baahan yahay in aan iska kaashanno. Waxaan uga mahadnaqaynaa Ethiopia oo qayb ka ah Amisom taageerada ay ka gaysanayso dhanka amaanka.” Ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed.
Ra’iiusl Wasaaraha Ethiopia Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay in Ethiopia ay diyaar u tahay ka qayb-qaadashada dhinacyada amniga iyo tababarka ciidamada Soomaaliya, tedros ayaa sheegay in Soomaaliya ay u muuqato in ay soo kabanayso.
Ridwaan Haji Abdiwali,